July Dream: Joys over Nargis - 1
ကူညီနိုင်တာ .. ကူညီတာတွေကို ၀မ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
အားလုံး အကူအညီ မလိုကြတဲ့ အနေအထားမှာ ဆိုရင် ပိုဝမ်းသာဖို့ ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။
Nargis period is traumatizing moment !
ဒုက္ခပင်လယ် ဝေနေချိန်မှာ လူအချင်းချင်း စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ အနစ်နာ တို့ ကို အရင်းခံပြီး ကူညီကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ၀မ်းသာ သာဓု ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ JDရေ အမျှ အမျှ အမျှ...အို့...
ကြက်သီးတွေထမိတယ် အကိုရယ်... သူများတွေလို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ၀ိုင်းဝန်းကူညီခွင့် မရပေမယ့် အကိုတို့လို စေတနာ မေတ္တာရှင်တွေကိုတော့ လေးလည်း လေးစားမိပါတယ်။ စိတ်ထဲကလည်း အကြိမ်ကြိမ် သာဓုခေါ်မိတယ်။ သာဓု သာဓု သာဓု...
တကယ့်ကို သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
သုကိုလ် ကောင်းမှု ပီတိတွေ မျှဝေပေးလို့ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
လေးစားဂုဏ်ယူ ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ် ကို JD ရေ။
(ဒါနဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ စကားစပ်ပြီး ထည့်မပြောတော့ပါလား။ ကို JD အစစ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား)
အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာ ကူညီခွင့်ရတဲ့ ကိုဂျူလိုင် တကယ်ကောင်းပါတယ် .ကူညီသူရော. ကူညီခံရတဲ့သူရော အားလုံး အတွက် ကောင်းပါတယ်ရှင်
သိပ့ါသိပ့ါ။ ကိုဂျူလှိုင်ရဲ့ စိတ်ဓတ်ကိုလေးစားပြီးသားး)
တကယ့်ကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကို မြင်ခဲ့ရတာ နာဂစ်ထဲက ထွက်လာခဲ့တဲ့ အမြတ်တွေပါပဲ ကိုဂျူလိုင်ရယ်..အဲဒီအတွက် ကျမ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်.. ကျေးဇူးလည်းလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တင်ပါတယ်..။ ဘယ်လောက်တောင် အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားလိုက ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် နားလည်နိုင်ပါတယ်..။
ထမင်းတစ်ဆုပ် ရေတစ်မုတ်ကုသုလ်က နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ကောင်းတွေပဲ။
ကိုဂျူလှိုင်တို့ လို စေတနာရှင်တွေသာ မရှိရင် သေဆုံးသူ နှစ်ဆဖြစ်ကုန်မယ်။
ချောကလက်တို့အဟာရဘီစကစ်တို့ဆိုတာ...
ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် မကူညီနိုင်လို့ ဒီထဲက ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်သွားလှူတယ်လို့ သဘောထားကာ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ဒီလိုကူညီနိုင်တဲ့နေ့ကို ရောက်ရပါလို၏လို့လည်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။
သာဓု ခေါ်ပါတယ် အကိုရေ